Lezi Izilinganiso Ezinengqondo Kunazo Zonke Ezivela KuSpice Nempisi - Okunye
UHolo noKraft Lawrence zingu-2 kwezingu- imibhangqwana engcono kakhulu ye-anime ngesizathu esihle.
Phakathi kwabo bobabili, banezindlela ezihlukile zokubuka umhlaba.
Futhi amakhemikhali abo othando phakathi komunye nomunye enza amava abo nokuzidela kwabo kucebe futhi kujule kunezinhlamvu ezifanayo.
Nazi ezinye izingcaphuno ezivela kuzo zombili UKraft Lawrence noHolo , ethathwe ohambweni lwabo ochungechungeni lwe-anime.
Nezinye izinhlamvu ezimbalwa…
Izilinganiso ze-Spice And Wolf:
Izilinganiso zikaKraft Lawrence
'Thina bantu singaphinde silahlekelwe yinto esilahlekelwe yiyo.' - UKraft Lawrence
“Empilweni, kuncono ucabange ukuthi izinto ezimbi zizokwehlela wena kunezinto ezinhle. Awukwazi ukubheka impumelelo yomunye umuntu bese ucabanga ukuthi kuzokwenzeka kuwe. Baningi abantu emhlabeni, ngakho-ke kunengqondo ukuthi oyedwa noma ababili babo bazoba nenhlanhla. Kodwa munye kuphela kini. Ukuthatha ukuthi inhlanhla izokuza kuwe akufani nokukhomba umuntu okungahleliwe ngomunwe nokubikezela okufanayo kubo. Kodwa ucabanga ukuthi ukubikezela lokho kuzogcwaliseka? ” - UKraft Lawrence
“Okubalulekile ukucabanga ngokuthile okucatshangwa omunye umuntu. 'Ukungazi kuyisono' akukhona mayelana nolwazi - kumayelana nokuhlakanipha. ' - UKraft Lawrence
'Uma bengithukuthelela yonke into encane, umzimba wami ubungeke ukwazi ukuyibamba yonke.' - UKraft Lawrence
'Inzuzo ibingafudumeza isikhwama semali, kodwa ingalokothi iqhume.' - UKraft Lawrence
'Amanga angenakuphikwa awehlukile eqinisweni.' - UKraft Lawrence
'Yize kungenzeka ukuthi ukungazi kuyisono, akunakwenzeka ukwazi konke.' - UKraft Lawrence
'Izindaba zingcono uma zinesiphetho, akunjalo?' - UKraft Lawrence
'Lowo owazi ukwenza okuthile uyinceku yakhe, owaziyo ukuthi kungani kufanele yenziwe leyo nto.' - UKraft Lawrence
“Ziningi izindlela zokuxazulula inkinga. Kepha uma isixazululiwe, kufanele siphile izimpilo zethu. Okusho ukuthi kufanele sikhethe hhayi isisombululo esilula, kepha esisivumela ukuthi sizizwe sinokuthula kakhulu uma sesenziwe. ” - UKraft Lawrence
'Isihambi asishiyi ukuzisola ngemuva endaweni ethile, kodwa izinkumbulo ezinhle.' - UKraft Lawrence
“Sobabili singabathengisi, futhi ngizonithembisa into eyodwa. Ngeke sihleke size sithole imali, futhi ngeke sikhale size sibhange. Futhi uqagele ini? Sizohleka. ” - UKraft Lawrence
“Asihlali ezweni lezinganekwane. Ngeke simane siziphindiselele kulabo abasikhaphele bese sithi “ukuphela”. Kufanele siphile ngemuva kwalokhu. Futhi ukuziphindiselela ngokukhaphela kumane kuziphindiselela. ” - UKraft Lawrence
Izilinganiso zikaMarc Cole
“Izimbongi zithi uthando alunakuthengwa ngemali. Abashumayeli bathi kunezinto ezibaluleke ngaphezu kwemali. Ngakho-ke yize sisebenza kanzima ukuthola imali, singakuthola kanjani okunye okubaluleke kakhulu kunalokho? ” - UMarc Cole
Izilinganiso ze-Fleur Eve Boland
'Imali ingabuthenga ubungani, kodwa hhayi izinga layo.' - UFleur Eve Boland
Izilinganiso zeHolo The Wise Wolf
“Isizungu ukugula okuholela ekufeni.” - Holo Impisi Ehlakaniphile
'Uma unolwazi ungazethemba ngokweqile futhi ukuzethemba okunjalo kungabulala.' - Holo Impisi Ehlakaniphile
“Umuntu angalahlekelwa yilokho angenakho kakade.” - Holo Impisi Ehlakaniphile
“Lapho isikhathi sifika, ngingadinga ukuboleka isifuba sami ukuze ngikhale. Lesi yisithembiso esisodwa engizosidinga kuwe. ” - Holo Impisi Ehlakaniphile
“Umhlaba ugcwele ububi impela, kodwa kukhona izingibe umuntu angazigwema inqobo nje uma azi ukuthi ukungazi kuyisono, phela.” - Holo Impisi Ehlakaniphile
“Ngifuna ukuthi uqonde ukuthi izikali zenhliziyo yami ziyohlala zintengantenga ngapha nangapha. Kepha kukhona okufanele ukwazi. Angisoze ngancika ohlangothini noma kolunye ngenxa yesisindo semali yegolide. ” - Holo Impisi Ehlakaniphile
“Anginalo uvalo lokukubuka uguga ngenkathi mina ngisemncane. Ngizokubuka ngisho nasembhedeni wakho wokufa. Angiyena umfokazi ekufeni. Kepha inhliziyo yakho ifana neyengane engenacala. Ihlale yemukela konke ngami, ngaphandle kokungabaza. Ngenxa yalokho ngiyesaba kakhulu. ” - Holo Impisi Ehlakaniphile
Khumbula isifundo, hhayi ukudumazeka. ” - Holo Impisi Ehlakaniphile
“Angifuni ukuphaphama ephusheni lami bese ngithola ukuthi ngingedwa. Ngikhathele ukuba ngedwa! Angifuni ukubanda! Angifuni ukuba nesizungu! ” - Holo Impisi Ehlakaniphile
“Kwakunezinhlobo ezimbili zamandla. Enye yazo kwakuyizikhwepha eziza nokuba nento yokuvikela. Enye kwakuwukuqina kokungalahlekelwa lutho. ” - Holo Impisi Ehlakaniphile
'Yize zinamehlo amabili, izidalwa eziningi zingabona kodwa into eyodwa ngesikhathi.' - Holo Impisi Ehlakaniphile
'Lapho izinkumbulo ezikhumbula ubuhlungu zibuhlungu kakhulu, kuba ngcono nokuhleka.' - Holo Impisi Ehlakaniphile
“Uma usunambithe ubuthi, ungaqeda ukudla. Uma kungafika kulokho ungenza isidlo esihle njenganoma yisiphi. ” - Holo Impisi Ehlakaniphile
“Ukukhaphela kudinga ukuziphindiselela. Isono kumele sibe nesijeziso. ” - Holo Impisi Ehlakaniphile
'Akunandaba ukuthi uhambo luni, uma ufika ekuphatheni komgwaqo, kufanele unqume ngokuphazima kweso ukuthi iyiphi indlela ozoyithatha.' - Holo Impisi Ehlakaniphile
'Uma ushintsha umbono wakho, isimo esiphambi kwakho, singaziguqula.' - Holo Impisi Ehlakaniphile
'Noma ngabe umbuzo unempendulo efanele, kwesinye isikhathi umuntu akakwazi ukuvele awunikeze.' - Holo Impisi Ehlakaniphile
“Uma umuntu eqamba amanga, okubalulekile akuwona amanga uqobo. Cha, kuyisizathu sabo. Kungani kubo. ” - Holo Impisi Ehlakaniphile
'Wonke amadoda anomona futhi ayiziphukuphuku, futhi bonke abesifazane bayiziphukuphuku ukujabula ngakho, iziphukuphuku zikuyo yonke indawo lapho ubheka khona!' - Holo Impisi Ehlakaniphile
Izikweletu zesithombe: Iphephadonga le-Spice And Wolf
Yini ofuna ukuyibona ngokulandelayo?
49 Kwezingcaphuno Zesqephu Esiphawuleka Kunazo Zonke Isikhathi
Yimuphi ama-Anime okufanele ngibuke? Nazi Izincomo eziyi-17